. ရောင်းအားအကောင်းဆုံးများ .
အသိဉာဏ်ခါး / ဗိုက်အဆာ
. အမျိုးအစားများ .
. ကိုယ်တို့အကြောင်း .
Shenzhen JIANYIKANG နည်းပညာ CO ။, LTD
Shenzhen JIANYIKANG နည်းပညာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် 2009, specialized in electric portable massager, မှ 2013 have our own factory asamassager manufacturer & supplier, 2014 build our own brand SOSTONE. 2017 factory developed move toanew address. 2020 အကူးအပြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစတင်ပါ.
. အသွင်အပြင်လက္ခဏာများထုတ်ကုန်များ .
Electric muscle stimulator trigger givesatoner look to the body and can be utilized for all kinds of people. ဖြည့်စွက်ကာ, it is an adaptable apparatus that empowers you to play out various medicines.